अलिकति ज्वरो आएको छ के गर्ने होला ? भनेर छोरीले फोनमा कुरा गरेको केहिसमयपछी …..(भिडियो) – Taja Khawar
अलिकति ज्वरो आएको छ के गर्ने होला ? भनेर छोरीले फोनमा कुरा गरेको केहिसमयपछी …..(भिडियो)
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १६, २०७८ समय: १२:०१:०२
घटना भएपछि अजयले आफ्ना भाईलाई फोन गरेका थिए । फोन गरेर कुशुमलाई मैले सिध्याएँ प्रहरी लिएर आइज भनेका थिए । जहिले पनि जिस्किएर त्यस्तै कुरा गर्ने गर्थे । त्यसैले उनलाई विश्वास लागेन । उनले अरुलाई कोठामा गएर हेर्नु त अजयले मलाई यस्तो भनेर फोन गरेको छ भनेर साथीलाई पठाएको बताए । साथीहरु जाँदा भित्रवाट ढोका लगाएर अजय भित्रै बसेका थिए । घटना भएको थाहा भएपछि भाइहरुले नै प्रहरी लिएर गएका थिए
Last Updated on: May 30th, 2021 at 12:01 pm